चार महिनामा ५३ हजार ३ सय चिनियाँ पर्यटक नेपाल भित्रिए::Online News Portal from State No. 4
चार महिनामा ५३ हजार ३ सय चिनियाँ पर्यटक नेपाल भित्रिए
चिनियाँ पर्यटकलाई नि:शुल्क भिषा
काठमाडौं, २४ जेठ – व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले पर्यटकको संख्या बढाउने लक्षसहित काम गरिरहेको छ। अझ सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमै बनाउने तयारी भइरहेको छ। तर पर्यटक भित्र्याएर आम्दानी गर्ने दिशामा भने सरकार गम्भीर देखिँदैन। पछिल्लो समय नेपालमा चिनियाँ पर्यटक बढिरहेका छन् तर चिनियाँ पर्यटकबाट भइरहेको आम्दानी कति हो? उनीहरुले यहाँ कति खर्च गरिरहेका छन् ?
एउटा तथ्यांकअनुसार नेपालले चिनियाँ पर्यटकबाट ४ महिनामा एक अर्ब रुपैयाँ गुमाएको छ। अध्यागमन विभागकाअनुसार सन् २०१८ को पहिलो चार महिनामा चीनबाट ५३ हजार ३ सय २२ पर्यटक भित्रिएका छन्। उनीहरु निःशुल्क भिषामा नेपाल भित्रिएका हुन्। ४ महिनाको हिसाब जोड्दा चिनियाँ पर्यटकलाई निःशुल्क भिषा दिनुपर्दा रु १ अर्ब १७ करोड ३० लाख ८४ हजार रुपैयाँ गुमेको हो। नेपालमा पर्यटकको रुपमा आउने विदेशी नागरिकले भिषाका लागि १५ दिनका लागि २५ डलर, ३० दिनका लागि ४० डलर, ९० दिनका लागि १०० डलर, १५० दिनका लागि २२० डलर शुल्क तिर्नुपर्छ।
वि.सं. २०७२ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकलाई भिषा शुल्क नलाग्ने प्रवधानमा हस्ताक्षर गरेका थिए। भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले थिलथिलो बनेको पर्यटन उद्योगलाई माथि उकास्न यस्तो निर्णय गर्नुपरेको दाबी त्यतिबेला गरिएको थियो। सो व्यवस्थाअनुसार अहिले चिनियाँ पर्यटक नेपालमा १५० दिनसम्म निःशुल्क भिषा पाउँछन्।
भूकम्पपछि नेपालमा पर्यटकको संख्या समेत कम भएको हुँदा र चीनसँग सम्बन्ध सुधारका लागि समेत यो निर्णय सरकारले गरेको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक दिपक काफ्ले बताउँछन्। सन् २०१४ मा नेपाल भित्रने पर्यटकको संख्या ७ लाख ९० हजार एक सय १८ थियो। २०१५ सो संख्या घटेर सो संख्या घटेर ५ लाख ३८ हजार ९ सय ७० सीमित भयो। पर्यटक बढाउनसमेत यो निर्णय उपयुक्त भएको विभागका महानिर्देशक काफ्लेको भनाइ छ।
भारतसँग १८ सय ५० किलो मिटर खुला सिमाना, चीनसँग १४ सय १४ किलोमिटर सिमाना छ। देश–देशबीचको सम्बन्धलाई सुधार्न यो प्रयास भएको महानिर्देशक काफ्लेको भनाइ छ। ‘दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पैसामा तुलाना गर्न हुँदैन’, उनी भन्छन्। तर नेपालीलाई चीनले निःशुल्क भिषा दिँदैन। भारतसँग भने २०५० को सन्धिले नै नेपाली र भारतीय नागरिकलाई अवतजावतका लागि भिसाको अवश्यकता नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सार्क देशका नागरिकलाई ३० दिनका लागि भिसा शुल्क आवश्यक पर्दैन।
अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार ४ महिनामा ३ लाख ८५ हजार ८ सय ९ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४४ हजार २ सय ३२ ले बढी हो। यो वर्ष जनवरीमा ७३ हजार एक सय ८७ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् भने अघिल्लो वर्ष जनवरीमा ६२ हजार ६ सय ३२ भित्रिएका थिए। १० हजार ५ सय ५५ बढी पर्यटकट यो वर्षको पहिलो महिनामा नेपाल भित्रिएका हुन्।
यो वर्षको फेब्रुअरीमा ४ हजार ९ सय २८ पर्यटक अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेका हुन्। अघिल्लो वर्ष ८४ हजार ६१ पर्यटक भित्रिएका थिए भने यो वर्ष सोही महिनामा ८८ हजार ९ सय ८९ पर्यटक भित्रिएका छन्। यो वर्षको मार्चमा एक लाख २४ हजार ६ सय ८६ भित्रिएको तथ्याङ्क छ। अघिल्लो वर्ष एक लाख ६२ हजार ९१ पर्यटक आएको तथ्यांक छ। मार्चमा भने यो वर्ष पर्यटकको संख्या घटेको देखिन्छ। त्यस्तैगरी अप्रिल महिनामा यो वर्ष ९८ हजार ६ सय ९३ पर्यटक नेपाल आएका छन् भने अघिल्लो वर्ष ८८ हजार ५ सय ९१ विदेशी पर्यटक भित्रिएका थिए। १० हजार १ सय २ पर्यटक अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी नेपाल आएका हुन्।
यो वर्षको पहिलो ४ महिनाको तथ्यांकअनुसार नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकको संख्या अघिल्लो सोही अवधिकोभन्दा १५ हजार ३७ ले बढेको छ। ४ महिनाको अवधिमा सबै भन्दा धेरै पर्यटक चीनबाट ५३ हजार ३ सय २२, भारतबाट ५० हजार ९ सय ५०, अमेरिका २९ हजार ५सय ८ बेलायत २१ ह्जार ९ सय ३१ क्रमस भित्रिएका छन्। अघिल्लो वर्ष भने यो ४ महिनाको अवधिमा धेरै पर्यटक भारतबाट ४९ हजार ६७, चीनबाट ३८ हजार २ सय ८५, अमेरिकाबाट २७ हजार ३ सय ४५ र बेलाएतबाट २० हजार ७ सय ५० पर्यटक भित्रिएका थिए।
पर्यटक आगमनको तथ्यांक हेर्दा सन् २०१७ मा १० लाख हाराहारीमा विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए। यो संख्यालाई वृद्धि गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डले पोल्याण्ड, स्विट्जरल्याण्ड, रुस लगायतका देशलाई पर्यटक आगमन हुने नयाँ स्रोत बजारका रुपमा छनौट गरेको छ। नेपालका लागि भारत, चीन, श्रीलङ्का, अमेरिका लगायतका देशहरु पहिल्यैदेखि पर्यटन स्रोत बजारका रुपमा छन्।
हुन त पर्यटन बोर्डले अघिल्लो वर्षदेखि नै सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेर एक्सपेरियन्स नेपाल, फोटो नेपाल, होमस्टे नेपाल लगाएका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। होटल, पर्यटन गन्तव्य एवं विमानस्थलजस्ता कारणले गर्दा २० लाख पर्यटक आएकै खण्डमा पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या देखिन्छ। नेपालमा हाल साना ठूला गरी २ हजार बढी होटल सञ्चालनमा छन्। सन् २०१९ मा भैरहवास्थित गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा आए सन् २०२० सम्म २ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनेछन्।